Tag: chimbichimbi | Martech Zone
Mashandisiro Ekushandisa Google Analytics Kuvandudza Yako Kushambadzira Kuedza
Svondo, May 31, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Dzimwe nguva ndinofunga vanofanirwa kushandura zita rema analytics kuita questionalytics nekuti analytics haimboita senge inopa ongororo iwe yauri kutsvaga… inowanzo gadzira mimwe mibvunzo. Kana iwe usinganzwisise iyo data kuseri kwemafirita, zvikamu, uye machati - unogona kunge uchiita fungidziro dzinotyisa zvichibva nemabatiro aunodhonza mamwe maripoti. Nyaya iripo, vanhu veQuicksprout vanopa huwandu hunovhundutsa: 80% yevatengesi vari kushandisa zvisizvo Google Analytics.
NeChishanu, Gunyana 19, 2014 China, Gunyana 18, 2014 Douglas Karr
Takakurukura matambudziko ekuyera magariro enhau ROI munguva yakapfuura - uye zvimwe zvekukanganisa kwezvaunogona kuyera uye kuti zvine chekuita nekushambadzira midhiya zvinogona kuva sei. Izvi hazvireve kuti imwe yemagariro enhau haigone kuyerwa nemazvo, zvakadaro. Heino muenzaniso wakapusa… iyo CEO yekambani ma tweets pane akafunga ehungwaru zvinyorwa, mafambiro ekambani, uye anorumbidza vashandi pamhepo vari kuita inonakidza